VevoCart: Njirimara ASP.NET Ecommerce Platform zuru ezu | Martech Zone
Jiri usoro VevoCart wulite azụmaahịa gị na ị ga-enweta ụlọ ahịa e-Commerce zuru ezu nke nwere ike ịhazi, nwee ike ịhazi ya na njikwa nke ASP.NET C #. Can nwere ike mfe wụnye VevoCart jiri Microsoft Web Platform installer or budata ya iduzi.
Akụkụ nke VevoCart
Responsive Design / Mobile Njikere - VevoCart na-abịa na mmeghachi omume na-agbanwe agbanwe, atụmatụ nke kwesịrị ekwesị maka ngwaọrụ ọ bụla ma ọ bụ desktọọpụ, laptọọpụ, mbadamba, ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka. Na VevoCart, ịkwesighi ichegbu onwe gị banyere ịhazi maka ngwaọrụ dakọtara ọzọ.
PA-DSS gbaara - VevoCart bụ ngwa eCommerce na-akwado ASP.NET PA-DSS. VevoCart na - akwụ ụgwọ site na VevoPay nke nyochare nke ọma na onye nyocha ruru eru na ọ bụ ngwa nkwụnye ụgwọ PA-DSS.
Multi-Store Nkwado - VevoCart Multi-Store version na-enye ndị ahịa ohere ịrụ ọrụ ọtụtụ ụlọ ahịa na ngalaba aha dị iche iche na-ekerịta otu nchekwa data na nhazi ịkwụ ụgwọ etiti.
Ngwá Ọrụ Ahịa Ahịa - A na-ahazi ngwa ahịa ahịa VevoCart ka ọ bụrụ nke na-agbanwe agbanwe na nke nwere ike ịdị na-akwado ọtụtụ ụdị mkpọsa ahịa. Ngwaọrụ ndị a ga-enye ụlọ ọrụ gị ohere ị dọta ọtụtụ ndị ahịa, wulite ntụkwasị obi ha, kwado ntụkwasị obi na njirimara akara.
Njirimara eCommerce zuru ezu - nwere ike ịgbakwunye ngalaba na ngwaahịa na-akparaghị ókè. E nwere ọtụtụ ngwaahịa ị nwere ike ịtọ. VevoCart na-akwado ọtụtụ ụlọ ahịa na ọtụtụ asụsụ asụsụ. VevoCart jikọtara ya na ọtụtụ ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ịntanetị. Akụkụ ndị ọzọ gụnyere ngwaọrụ ahịa, akụkọ nyocha, ntọala ngosi, ibe ọdịnaya, na ndị ọzọ.
Adịchaghị echekwa Storefront - VevoCart biara na ndebiri ndebiri nke oge a nke ga - eme webụsaịtị gị ka ọ bụrụ nke nwere ntụkwasị obi ma nwee ntụkwasị obi, nke ga - enyere aka mee ka ndị ọbịa gị bụrụ ndị ahịa gị.
Ogwe njikwa dị ike - VevoCart Admin Panel nyere gị njikwa zuru oke na weebụsaịtị gị. Ogwe ahụ na-enyere gị aka ijikwa ụlọ ahịa gị, ngwaahịa, iwu, ndị ahịa, mbupu na ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Comlọ ahịa Facebook Azụmaahịa Facebook bụ njirimara nke na-enye ndị ahịa ohere itinye ụlọ ahịa na Facebook fan page. Ndị ahịa ndị debanyere aha na ibe ha nwere ike ịzụta ngwaahịa niile ka ha nọrọ na weebụsaịtị.
eBay na-ekwusara eBay bu otu n’ime ahia kachasi ere ahia na oru gi. Edebanye aha ngwaahịa gị na eBay enweghị ike ileghara anya! VevoCart na-enye gị ngwa ọrụ eBay, nke a ga - enyere aka bulie ahịa gị nke ọma.
SEO & SMO Enyi na Enyi - VevoCart na-enye URL canonicalization atụmatụ maka igosi URL kachasị amasị gị iji chọọ engines. Maka nsụgharị Multi-Store, ndị ahịa nwere ike ịtọ "“lọ Ahịa Karịrị Mmasị" iji gosipụta na ngwaahịa na peeji nke edemede na-ezo aka na peeji nke canonical nke ụlọ ahịa ahọrọ.
isi iyi Usoro - So VevoCart gụnyere ASP.NET isi koodu iji MS SQL 2005 backend nchekwa data. Nke a na - enye gị ohere igbanwe koodu isi ma gbasaa arụmọrụ ya ngwa ngwa.
Licensegwọ Oge Otu Oge - Enweghị ụgwọ na-aga n’ihu Otu ụgwọ ikikere oge na-ahapụ gị ka ị jiri ngwaahịa VevoCart gị ogologo oge ịchọrọ. Enweghị ụgwọ ọnwa. Enweghị ụgwọ azụmahịa.
Tags: asp.netc#nkọchaecommerceecommerce n'elu ikpo okwuMicrosoft na ụgbọ ibu azụmahịaụgbọ ibu azụmahịanweghachi
CampaignAlyzer: Sochie ma mee mkpọsa nchịkọta